About Us-LUXURY HOTEL FAUCET Manufacturer
Antsoy fanohanana maimaim-poana: + 86 136 8955 3728
icon1 icon2 icon3 Sokajy
Ranonorana Systems & fandroana Loha
Fahadiovana mety tsara Accessories
koveta be fandroana tatatra
Fandroana varavarana Hardware
siphonkoveta be fandroana tatatraefitra fandroanaElectronic faucet
0 ny hovidiana
Tsy manana zavatra ao amin'ny lisitry ny hovidiana.
Tsy manana zavatra ny mampitaha.
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Ahmedabad
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Bengaluru
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Chennai
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Delhi
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Dhaka
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Georgia
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Hong Kong
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Hyderabad
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Jakarta
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Karachi
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Kolkata
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny ho an'ny Kuala Lumpur
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Lahore
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Manila
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Mumbai
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Nagoya
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Seoul
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Singapore
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Tehran
Bathroom faucets mpanamboatra mpamatsy ambongadiny for Tokyo
View rehetra Tags
Armati-- China Faucet Manufacturer for Luxury Hotel Project.
Armati fandroana fitaovana, ny nitarika mpanamboatra ny avo-kilasy marika fahadiovana amin'ny Asia-Pacific Region. Manana efitra fandroana faucet famokarana fitaovana fototra ao amin'ny Southern China Jiangmen tanàna (Heshan) .We koa acquird alemà orinasa mpamokatra entana mpiara-miasa. tany am-boalohany avy 1966 no tafiditra an-trano fidiovana famolavolana orinasa, manomboka amin'ny tapaky ny volana 1990s, isika manomboka faucet sy ny fandroana mety famokarana orinasa, tao Foshan tsirairay sy Heshan City.Our sokajy ahitana vokatra avo lafo vidy farany faucet, trano fandraisam-bahiny Accessories fitaovana fidiovana, trano fandraisam-bahiny ranonorana rafitra, trano fidiovana Flushing miditra tsimoramora, mandeha ho azy sensor faucet, ary tanteraka tamin'i tena namboarina vato solon zava-poana sy ny bathtube efitra fandroana.
Amati efitra fandroana efa lasa OEM orinasa mpamokatra entana, mpiara-miasa maro alemà sy italiana marika fanta-daza, anisan'izany ny tena malaza Dornbracht, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti sy ny sisa, indraindray mamokatra tanteraka isika modely, indraindray isika hanome ampahany sy components.With kalitao avo vokatra sy ny vidiny ambony mampitaha resonable, isika soa aman-tsara nahasarika -kintana dimy lehibe Hotel Management Group Azia-Pasifika ao amin'ny faritr'i sy ho tonga ny maharitra mpiara-miasa, toy ny Kempinski, Sheraton, ny Venetian sy ny maro hafa. (Jereo manaraka ny Armati hotely tranga tetikasa fianarana)
Amin'ny Shinoa tsena anatiny, isika koa dia mifantoka amin'ny hotely mirenty tetikasa market.All ny paritany Distributor ofisialy ihany koa Distributor ny GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT .We Ihany koa ny lehibe indrindra mpamatsy superstore eto amin'izao tontolo izao tahaka an'i Walmart,The Home Depot, Lowe ny, dia te-mahafoy ny tsena iraisam-pirenena anjara ho an'ny trano fandraisam-bahiny mirenty tsena ampahany. (Jereo manaraka ny Armati hotely tranga tetikasa fianarana ao an-tokantrano sy ny any ivelany)
Amin'ny maha-fitaovana mpanamboatra maherin'ny 20 taona traikefa, dia efa voangony maro ny bobongolo ho samy hafa fomba sy shape.Partner faucet amin'ny italiana mpamorona isika andian 38 faucet sy 16 andian-dahatsoratra fandroana Accessories toy ny fitsipika range.But ananantsika 30% raharaha ao an-tokantrano toy ny fanao vokatra, ary> 50% raharaha iraisam-pirenena toy ny OEM namboarina famokarana. (Jereo manaraka ny Armati faucet efitra fandroana Accessories vokatra Catalog)
Soso-kevitra izahay ny mamokatra tsy manam-paharoa faucet isaky ny endrika izay manana nofy sy ny hetaheta! Izahay teo ambany MOQ for OEM famokarana, dia afaka mamokatra na dia namboarina faucet noho ny tetikasa manokana. Imagine fa ny mpamokatra amin'ny mitovy kalitao faneva ho HANSGROHE, GROHE afaka faucet accroding ny hevitra, sketches, na sary, ary nitarika ny fotoana ihany no 10 andro mba 4 herinandro. (ny vao haingana ohatra avy amin'ny famolavolana hevitra ho faobe famokarana farany ihany 45 andro) . Izany dia ho tsy manam-paharoa, manasongadina sy tsara indrindra mitondra ny mpamorona ny talenta, fiofanana sy manosika tanan'ny mpamorona marika. Toy ny tena malaza Philippe Starck. (Jereo eto ho an'ny Armati Custom faucet ho an'ny trano fandraisam-bahiny tranga fianarana)
1) Te-hahalala ny tantaran'ny Amati, orinasa Shinoa ve ianao na vahiny nanana renivohitra orinasa, ary inona no fifandraisana eo amin'ny orinasa alemà?
Isika multi-ekipam-pirenena, ny vokatra fototra equit amin'ny famokarana sy ny fitantanana Taiwan knowledge.We nahazo ny am-polony taona Alemaina fototra amin'ny traikefa amin'ny fahadiovana ware.We nokaramaina italiana vokatra mpamorona mba hamorona antsika manokana model.We dia samy Shinoa sy German.In ny Shinoa an-toerana sy iraisam-pirenena tsena tsena, ampiasaintsika Amati tahaka ny forohana ho an'ny fahadiovana vokatra.
2) Te-hahalala bebe kokoa ny famokarana fototra, toy ny toerana ara-jeografika, faritra, ny mpiasa sy QC, ary koa ny haben'ny ny fandraharahana, sns?
Isika manana salantsalany-salantsalany famokarana fototra amin'ny 10000 metatra tora-droa sy 150 worker.We mifantoka amin'ny avo indrindra-dimy farany Stars Hotel tetikasa tsena, amin'ny lehibe fanao amin'ny mpanjifa market.Our ity dia ahitana Hotel sy Interior endrika, mpiantoka, developer (ny ankamaroany mpampiasa farany), Retail dia nozaraina dia tsy ny priority.We hampihatra JIT famokarana style.In 2015, ny Shinoa ny tsena turnoverbout USD 12 tapitrisa, satria hentitra fandraharahana manontolo turnover ny 35 tapitrisa dolara amerikana.
3) Ahoana no mba ampanjifaina faucet? Manana tetikasa iray ihany eo am-pelatanany, no mangataka mba ampanjifaina ny faucet?
Manana 50% ny fanondranana vokatra ho an'ny mpanjifa ampanjifaina faucet, jereo eto ho an'ny antsipirihany.
4) ny faucet dia avo-farany, trano fandraisam-bahiny kintana dimy kilasy, tiako ho fantatra izany amin'ny an-tsipiriany, Azonao hampahafantatra izany?
Mampiasa tsara ny tsara indrindra varahina mba hanao faucet sy voapetaka sy ambonin'ny teknolojia fitsaboana toy izany koa ny alemà fitsipika, Manana ny Ampidiro ny fantsona ho an'ny kalitao singa toy ny tanimanga Kereox cartridge sy NEOPERL aerator. (jereo eto Armati faucet vokatra tsipiriany)
5) Afaka manolotra Hotel efitra fandroana tariny, ny ankapobeny fonosana?
Azo antoka, dia hamokatra fitaovana fidiovana varahina tahaka ny faucet, trano fidiovana Accessories, fandroana andian-dahatsoratra, ary ny kovetabe fandroana lao, isika ihany koa dia manana solon-bato sy zava-poana ny mpiara-miasa amin'ny koveta be fandroana. Wf mahalala trano fandraisam-bahiny rehetra trano fidiovana tsy manam-paharoa, ny trano fandraisam-bahiny manokana manaraka ny tontolo iainana, lafiny hanao ny mari fitting.Sometimes efitra fandroana tsirairay, mividy malaza marika ny efitra fandroana mety, mba tsy ho sahaza noho ny eo an-toerana fitaovana fanadiovana famaritana. Tsara kokoa ny mahita ny zava-nitranga, toetra namboarina antoka mpanamboatra hiara-miasa amin'ny, fitandremana kanto vokatry sy ara-toekarena, Raha mampiasa fotsiny rehetra efa misy marika modely, tsy ilaina ho an'ny mpanenona mahay.
6) Aiza no famokarana fototra, no mitsidika ny fototra ao Shina?
Ny famokarana base tany amin'ny faritra atsimon'i Chine Jiangmen tanàna (Heshan), Guangdong province.We nametraka birao ao Shenzhen ho an'ny tsena an-trano, dia manana showroom amin'ny tanàna downtown.Welcome mba hitsidika ny fototra mba hiresaka momba ny tetikasa fitakiana. Indraindray 1 na andro 2 miatrika ny zava-misy fivoriana afaka mamaha olana bebe kokoa noho ny fifandraisana mailaka volana maro.
(Jereo eto ho an'ny Armati famokarana fototra sy ny vokatra antsipirihany)
Armati efitra fandroana fitaovana, ny nitarika mpanamboatra ny avo-kilasy ny fahadiovana varotra samy hafa any Azia-Pasifika Region. Manana efitra fandroana faucet famokarana fitaovana fototra ao amin'ny Southern China Jiangmen tanàna (Heshan) .We alemà ihany koa ny nahazo ny orinasa mpamokatra entana fototra.
Showroom: Top Living, 3069 Atsimo Caitian Road, Futian District, Shenzhen City, Shina. + 86-755-33572875
Didy sy ny Returns
Copyright © 2004-2016 Armati Bath Hardware Zo rehetra voatokana
AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS CA DIEM NY zh-CN zh-TW CO HR CS DA NL EO ET TL FI FR FY GL KA DE EL GU HT HA haw IW HI HMN HU IS IG ID GA IT JA JW KN KK KM KO KU KY LO LA LV LT LB MK MG MS ML MT MI MR MN MY NE NO PS FA PL PT PA RO RU SM GD SR ST SN SD SI SK SL SO ES SU SW SV TG TA TE TH TR UK UR UZ VI CY XH YI ZU avo efitra fandroana farany faucet efitra fandroana faucet mpanamboatra fandroana faucet mpanamboatra efitra fandroana mpanamboatra fitaovana high quality efitra fandroana Accessories Hotel efitra fandroana facuet mihaja fandroana fixture vatana fiaramanidina rafitra sensor faucet mpanamboatra Shina miafina fandroana mpanamboatra Shina fandroana rafitra orinasa Shina fandroana Accessories mpamatsy niainga manda paompy mpamatsy